How Hackers Hack - Semalt Expert Concerned
Muzvinhu zvose zviri paIndaneti zvine chokuita nevhavha, kazhinji pane ngozi yekunyengedza. TheIndaneti inosanganisira kushandiswa kwevashandisi uye kugamuchira kwemashoko kune server. Somugumisiro, huwandu hwehutano hwewebhu hunotarisa kumushandisi uyekwete kugadzikana kwetsika. Nokuda kwechikonzero ichi, vanhu vanogadzira e-commerce webhusaiti iyo inogona kungoita mabasa aya nenzira yakaratidza,kusazvidza chokwadi chokuti vanhu vane vavariro dzakaipa vanogona kushandisawo mukana uyu. Somugumisiro, kuchengeteka kwewebsite yako uye yeyoVashandi venyu vanoenderana nekubudirira kwaunokwanisa kurwisana nekuedza kunetsa - rovelo hersteller.
Kune nzira dzakawanda kuburikidza nevanhu vanoita zvavanoda. Hackers 'chinangwa ndechekutitsvaga kusina mvumo yekupinda muIndaneti uye kuwana ruzivo rwemashoko izvo zvisiri izvo zvinogara mu database database. Mune zvimwe zviitiko, vanogona kuedzakuunza webhusaiti pasi pasi uchishandisa botnets kana dzimwe nzira dzinotyisa. Vanhu vazhinji vari kuumba mawebsite akaita sebloggs kana e-commerce nzvimbo dzinoshamisikakuti vanotya vanoita sei hack. Kuti mumwe agadzire nzira uye nzira dzekudzivirira vanokanganisa, pane chikonzero chekunzwisisa kuti vanoita seihack websites.
Jack Miller, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira Semalt ,inotsanangura dzimwe nzira, izvo vanokuvadza vanoshandisa, sezasi:
Cross Site Inosangana (XSS)
Aya ndiwo magwaro ekubvunzurudza anokwanisa kumhanya pane sevha uye kurwisa kune ngozikombiyuta..Munhu anotengesa anotanga nekunyengedza muchengeti kuti aone kubatana kunokuvadza. Iyi link inoshandisa script mu browser, apomuchengeti anowana zvivako zvekushandisa mamwe maitiro. Semuenzaniso, mutengesi anogona kutora zvese zvakashandurwa pakushandura sepa passwords uye cache. The hackeranogonawo kushandisa shanduro yakafanana semakrofoni pamwe ne webcam remotely pasina kubvumirwa kweakakuvadzwa.
Izvi zvinoshandiswa zvinoshandisa kuoma kweimwe mimwe mitauro. Ichikushandisa zvakanyanya mabasa emawebsite ane hurongwa hwekushaya maitiro. Semuenzaniso, nzvimbo ye PHP inogona kuzviisa pasi peSQL injection attack.Mufambi anenge achingoedza kuwana database yewebsite uye anowana zvose data. Ruzivo rwakadai se data data, user logins, uye chikweretiKadhi ruzivo runowanzosvibiswa nenzira iyi. Uyezve, anorwisa anogonawo kukanda, kuisa kana kugadzirisa masimi muzvikamu uye mitsaraye data yauri kushandisa. Mune dzimwe nguva, vaseki vangashandisa Packet kuronga, kwavanoba iyo data sezvo ichipfuura pakati pevharejiuye user.
Patinoita mawebhusayithi, tinokundikana kuziva kuti kurasikirwa kwevashandi vanogonakuisa pamabhizimisi edu e-commerce. Somugumisiro, mawebsite akawanda anovakirwa kuti ashumire mutengi asina mupfungwa mupfungwa. Hackers vanogona kuitanzira dzakawanda pane webhusaiti, zvizhinji zvacho zvinogona kusanganisira kuba, kunyengera kana kushandiswa kwemashoko ega ega. Muchidimbu, kuchengeteka kwakosite, pamwe chete neyevashandi vako, zvinoenderana newe, muridzi uye admin. Yakawanda yekutsvaga Engine Optimization (SEO) miedzo inowedzera pakuwedzerakubvuma kwewebsite uye SERP kuonekwa. Vatengesi vanogona kukonzera pasi nzvimbo panzvimbo iyi. Ivo ruzivo munzira dzekunyengedzainogona kuchengetedza kukanganisa kwekambani yakawanda pamwe nekuwedzera simba rechiremera pane kutsvaga injini nekuda kwekuchengeteka.